Plasma Mobile dia efa zava-misy | Avy amin'ny Linux
Tsy maintsy lazaiko fa faly aho. Andro vitsy lasa izay, mijery ny fivoaran'ny Plasma Mobile Miaraka amin'ny tetikasan'ny Telefaona Plasma dia naneho hevitra tamin'ny tambajotran-tseraserako aho fa tsy maintsy niroso tamin'io ny Ubuntu, saingy tsy noeritreretiko mihitsy hoe Plasma Phone dia efa zava-misy ary ao anatin'ny fotoana fohy.
1 Inona no atao hoe Phone Plasma?
2 Ahoana ny fametrahana apps Plasma Phone
3 Ny fandraisako an-telefaona Plasma
Inona no atao hoe Phone Plasma?
Ny valiny fohy: KDE amin'ny telefaoninao. Izany hoe Plasma Workspace, KWIN / Wayland ary teknolojia Telepathy hitantanana antso an-tariby.
Ahoana ny fametrahana apps Plasma Phone
Izany rehetra izany dia mandeha amin'ny Kubuntu, izay arakaraka izay lazain'izy ireo amintsika ao amin'ny tranonkalany dia afaka mametraka rindranasa izahay na inona na inona izany na GTK na QT, miaraka amina tsotra:
Ny rindranasa azontsika apetraka dia:
Fampiharana Gnome (oh: GnomeChess)
X11 (oh: xmame)
ary mety ho ny hafa miorina amin'ny Qt toa ny Sailfish OS na Nemo.
Mazava ho azy fa mbola be ny fampandrosoana ho avy Telephone Plasma afaka ny ho variant stable raha oharina amin'ny Operating Systems finday izay efa eny an-tsena, saingy azo tsapaina, eny, amin'izao fotsiny ao anaty LG Nexus 5.
Satria manana iray aho dia azo atao ny manapa-kevitra ny hanandrana azy io kelikely, rehefa manana aho nanampy fampiasa hafaNa izany aza, raha iray amin'ireo sahy manana Nexus 5 te-hanandrana azy ianao dia mila manohy fotsiny ireto torolalana ireto.
Ny fandraisako an-telefaona Plasma
Mahaliana izany. Rehefa nieritreritra izahay fa ny Android, iOS, Windows Phone, ary OS hafa misimisy kokoa toa ny Sailfish, FirefoxOS na ny telefaona Ubuntu no safidy hafa rehetra nananantsika dia niseho io vatosoa kely io. Ho an'ny iOS sy Android dia toa tsy misy ahiahy, fa ny FirefoxOS sy ny Ubuntu Phone dia manana fotoan-tsarotra.
FirefoxOS dia tsy miainga firy. Hevitra tena tsara fa nisy fanombohana somary antonony, indrindra noho ny tsy fisian'ny Fampiharana sy ny fidirana amin'ireo tambajotra sosialy. Rafitra miasa izay miady mafy ny ho tafavoaka velona, ​​saingy indrisy tsy dia mifantoka firy, farafaharatsiny ao amin'ny media. Tao amin'ny forum Plasma Mobile dia nanontany ny mpampiasa iray:
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa Firefox OS aho satria io no OS finday tsara indrindra niainako hatrizay teo amin'ny fiainako. Inona no atolotry ny Plasma Mobile amiko izay tsy ananan'ny Firefox OS?
Mampiasa Firefox OS aho izao satria io no rafitra fikirakirana finday tsara indrindra niainako teo amin'ny fiainako. Inona no atolotry ny Plasma Mobile amiko izay tsy ananan'ny Firefox OS?
Fampiharana Qt / C ++ sy QML.
Qt / C ++ sy ny rindranasa zanatany ao amin'ny QML.
Ary tsy maintsy lazaiko, valiny tena tsara izany. Mampanantena ny HTML5, mety ho ny ho avy io, saingy ny fotoana nampiasako ny Firefox OS dia nampiseho tamiko fa tsy haingana araka ny nampanantenainy azy.
Ubuntu Phone ka inona no holazaina? Efa nanandrana aho, hitako fa miasa ary mijaly amin'ny mitovy amin'ny FirefoxOS ... fampiharana sy fahaiza-miasa antonony izay mamela betsaka ny faniriana. Na izany aza, mieritreritra aho fa misy ny ho avy raha manao zavatra tsara ny vahoaka Canonical.
Tonga izao ny Plasma Phone miaraka amina tolo-kevitra mahaliana, tsy mamerina mamorona na inona na inona, mampiasa teknolojia voaporofo ary mandeha. Ho fanampin'izany, mamela anao hametraka karazana rindranasa saika tsy ijerena na Qt na GTK io, ary mahita ny vaovao vaoavao momba ny tetik'asa izay mivoatra i KDE mba hampandeha ny fampiharana Android amin'ny fomba natoraly, hitako ny hevitry ny zava-drehetra.
Mbola tsy namaky na inona na inona momba ny fampidirana izay kasain'ny Ubuntu Phone ary efa hita amin'ny OSX sy iOS aho, fa amin'ny fampiasana ny teknolojia Plasma mitovy amiko dia tsy dia fahita firy ny mahita fandrosoana amin'io lafiny io atsy ho atsy.
Betsaka ny mialoha, ny Plasma Phone dia tsy tonga lafatra, mila ny fifandraisana an-tsary aza izy io, fa avelako ny horonan-tsary ho anao hahafantatra ny fandehan'ny raharaha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Plasma Mobile dia efa zava-misy
Tena liana amin'ity tetikasa ity aho ary koa ny Sailfish, saingy mbola tsy nahita fomba handefasana azy ireo ho any Amerika Latina hitsapana izany aho.
Tsy misy orinasa amerikanina latina liana amin'ny fampiasam-bola amin'ireto tetikasa ireto… ary ny tsena latinina dia ampihimamba ihany ary matetika ny olona misafidy ny hiditra Windows, ios ary Android…
Nampahatsiahy ahy ny nolazainao rehefa tonga tao amin'ny fireneko ny FirefoxOS, dia nataon'izy ireo dokambarotra ho toy ny smartphone ho an'ny ankizy (finday voalohany nataoko).
Tena tsara ity vaovao ity. Tiako ny plasma sy ny Kde. Antenaina fa ho matotra haingana, ny iray hafa dia ny mifanentana sy ny fahombiazana noho ny fahasamihafan'ny terminal
snayder dia hoy izy:
toy ny sosona fanaingoana ho an'ny telefaona ubuntu izany. Azo apetraka amin'ny ho avy ve izany amin'ny ubuntu touch satria napetraka ao amin'ny ubuntu ny plasma? tsara izany.
Valiny amin'ny snayder
Vaovao tsara, arakaraka ny isian'ny safidy hafa, ny tsara kokoa. Tsy manam-paharetana aho ny hahatongavan'ny sasany amin'izany any Amerika Latina. Salama.
Ireo olona ireo dia afaka mifaninana mivantana amin'ny Android, BB ary Windows Phone tsy misy olana, mila mamindra ny chip fotsiny izy ireo, ho hitantsika eo izany rehetra izany amin'ny ho avy 😀
Ny telefaona Ubuntu no kopia mora amin'ny iphone, amin'ity horonantsary KDE ity dia hitako ireo sary mitovy amin'izany ...
TSY METY MPANamboatra GRAPHIC VE IREO?, NAHOANA IZANY NO TSY MAINTSY MAMPIASA IONI ION ICON?.
Ny telefaona Ubuntu dia tsy mitovy amin'ny iphone, ary tsy manana bokotra ary mora ny manome hevitra toa izany
Ary ny sary masina ampiasain'ny kde mahazatra, ny iray na roa any dia mitovy amin'ny an'ny ios ihany, izay naka tahaka ny endrik'i numix ihany.
Na izany na tsy izany, dia kinova alfa io, efa naneho sary masina vaovao izy ireo izay foronin'izy ireo ho an'ny kde, ary azo antoka fa ho azonao ovaina izy ireo raha tsy tianao.
Ho fanampin'izany, tsy manelingelina ahy ny mandika zavatra sasany avy amin'ny famolavolana interface hafa, ny interface tsara amin'ny iOS sy ny Android dia tsara sy mora takarina, tsy ilaina ny mamorona foto-kevitra vaovao amin'ny interface toa an'i ubuntu. nanao. Raha heverina fa manohana birao nentim-paharazana foana i kde, dia tsy ratsy ny fanaovan'izy ireo izany amin'ny kinova findainy, izay, raha ny tokony ho izy, dia nahatratra tsara ary mampatsiahy ny plastika kde desktop, manana lohahevitra mitovy amin'izany aza izy, toa hanana fidirana tena tsara izy io.
Tena antenaiko fa mahomby izy ireo satria tsara be izany. Ataoko fa mandeha amin'ny telefaona ubuntu izany, sa tsy izany?
Tena tsara. fanontaniana iray, inona no nanjo ny plasma miasa? Heveriko fa nangina ilay tetikasa sa efa maty? Na dia proKDE aza aho dia tsy maintsy milaza aho fa ny telefaona manaraka dia ho jolla, mahatalanjona ny trondro. Izaho koa dia miandry ny takelaka jolla izay ividiananao mandritra ny croudfounding anao.
Ho an'ireo mpanaraka ny KDE dia faly izahay, saingy hitako fa manana ny iray amin'ireo eo an-tanako ireo
fa ny fahatsiarovako fa afaka mampiditra smartphone Android amin'ny KDE ianao, ary mahita hafatra, mandefa zavatra amin'ny tabilao, ary zavatra maro hafa, azoko an-tsaina fotsiny hoe ahoana no tokony hisy amin'ity OS vaovao ity, azoko atao ny mieritreritra fa ho tsara kokoa noho izay iOS dia manana sy OSX
Tiako izany, antenaiko fa manana fahombiazana izy ireo ary manomboka manangana zavatra toa ny efa ananantsika ao amin'ny linux, fa ny sandry.
Raha ny fanazavana, toa tsy nety tamiko ny firefox, ny tena marina dia tsy dia tsara ho ahy ilay OS, mifototra amin'ny rindranasan-tranonkala.
Raha te hilaza ny marina dia toa azo tsapain-tanana kokoa ity tetikasa ity noho ny Firefox OS (vao nanomboka nanomboka tamin'ny fahitalavitra Panasonic SmartViera) sy ny Ubuntu Phone (hatreto, tsy hitako izany any Amerika Latina).
Mikasika ny interface sy toolkit hafa, tena mendrika izany.
Tetikasa tsara 🙂 Amin'ny maha-izy azy dia miorina amin'ny Ubuntu Phone izy io. Izay hitako tsara, ny maha-KDE sy Ubuntu Phone miorina amin'ny QML dia afaka mamadika tombontsoa ihany ho azy roa.
Endika Moreno dia hoy izy:
Tena faly aho. Tsy mampiasa KDE aho fa tiako ny manaraka ny diany ary mizaha toetra ireo endriny vaovao. Mahafinaritra ahy izany, saingy mifikitra amin'ny compiz tsy miankina amiko aho ao anaty andohalambo. Raha resaka mifanentana amin'ireo fampiharana android dia tsy voatery midika izany fa toy ny manana Android amin'ny KDE. Izaho dia mampiasa BlackBerry Passport izay mandeha tsy misy olana saika ny fampiharana Android rehetra, saingy tokony homarihina fa raha tsy misy serivisy google dia maro amin'ireo izay miasa no tsy dia mendrika loatra, ary miahiahy aho fa hampifanaraka ny tolotra ho an'ny OS hafa ny google. Satria tsy misy na inona na inona ny fampiharana teratany ary raha ny marina dia tsy mila fanampiana be dia be avy amin'ny apks ny KDE ...
Valiny tamin'i Endika Moreno
Midika ve izany fa afaka manana supertux amin'ny findaiko aho izao? XD
Tsy dia tsara, tena tsara, mankarary ilay tetikasa fa tsy manana nexus aho fa raha ny fahitako azy dia rafitra tsara kokoa noho ny iOS sy ny Android, ny tiako holazaina dia hoe: mora kokoa sy intuitive kokoa izy ireo amin'izay hita ao amin'ilay horonan-tsary.
Azo antoka fa ho tonga amin'ny Android amin'ny alàlan'ny F-Droid i SuperTux, satria mino aho fa hahatratra ny Google Play izany.
rainerhg7 dia hoy izy:
Oay! Eny tokoa, ity tetik'asa ity dia mety kokoa amiko (araka ny nametrahan'i Eliot azy). Manantena aho fa avy eto dia mampahafantatra anay izy ireo rehefa misy ny fividianana / fivezivezena.
Miarahaba anao mpiara-miasa Elav, ary misaotra anao nizara an'ity vaovao tsara ity! (Tsy fantatro akory)
Mamaly an'i rainerhg7
Lahatsoratra tsara any @elav!
Te hanana anjara amin'ny statistika angamba aho fa tsy ny fikirakira.
Na dia ny fomba mora indrindra sy haingana indrindra amin'ny fanaovana kajy ny masontsivana fanjifana aza dia midika hoe mety ho hentitra kokoa isika ary hampiasa ny "mediana" fa tsy ny "mean". Inona no hamonjy antsika amin'izany? Miala ireo isa raha sendra nandany fahatsiarovana betsaka ny fifandraisana. Ohatra, alaivo an-tsaina hoe ireto mpanjifa manaraka ireto izay mihinana ireto soatoavina manaraka ireto, ao amin'ilay singa tadiavin'izy ireo fahatsiarovana (KB, MB, MiB, sns):
Ny salanisa dia hanome eo amin'ny ~ 30
Ary izany satria manana faran'ny lehibe (150) isika, ary adala ny kajy. Ny mediana dia misy ny fandaminana ireo angon-drakitra ireo, mizara ny isan'ny santionany amin'ny 2 (ivonay) ary avy eo dia mahazo ny isan'io toerana io. Amin'ity dia hanana zavatra toa izany isika
Ka ny tianay holazaina dia: 8/2 = 4 dia ny ~ 10
Eto ianao dia afaka mahita fa na dia adala aza ny manao tafahoatra dia hanome lanja mitombina kokoa izany. Raha manampy ny mpanjifa mandany 200 isika, ny medianina dia 11, raha ny salanisa dia mety mankany …….
Fandraisana anjara fotsiny izy io, ary azo iadian-kevitra tokoa, satria tsy mifandray amin'ny fifandraisana izany.
Mamihina olona linuxera 🙂
Ralehilahy, hialana amin'ny soatoavina faratampony dia misy zavatra toy ny dikan'ny geometrika, na dia azo ampiasaina aza ny dikany mavesatra ka ny antontan'isa dia manakaiky kokoa ny isan'ny ekipa manana fahaiza-manao, sns.
Ilaina ny mijery raha fizarana marin-toerana izany, fa ny tena izy dia manao asa mahafinaritra i KDE amin'ny lafiny rehetra ... Amin'ny ambaratonga fiasana dia toa feno tanteraka izany; ny olana dia hitovy amin'ny mahazatra hatrany: Applications. Izay rafi-piasana izay tsy manana Whatsap (na tiana na tsy tena izy dia zava-misy) dia tsy hahatratra ny fitomboana mitovy amin'ireo mpifaninana aminy sisa. Na izany na tsy izany, amin'izao fotoana izao dia hitako fa tena feno izy io ary miaraka amina endrika mifanaraka amin'ny Plasma5, izay mety ho rafitra iray izay mila miresaka betsaka.
Raha azo ampitaina ny rindran-dranomasina, dia tsy hisy ny olana amin'ny whatsapp, manana fampiharana whatsapp roa ao amin'ny jolla isika izao, iray miasa farafaharatsiny.
Salvador Flores dia hoy izy:
Ahoana no ananako ny installer ary apetrako amin'ny findaiko.
Valiny tamin'i Salvador Flores
nolgan dia hoy izy:
Raha tafiditra ao anaty finday mivantana ny kde mobile sy kubuntu, ary miaraka amina dock connect hd, araho maso ny totozy fitendry ary asio finday sy solosaina ao amin'ilay fitaovana iray ihany
Ny fametrahana ny linux distro 100% tafiditra ao anaty finday ary afaka mampiasa ilay finday ho solosaina BASE, na tablette ary finday
ity no ho avy izay tsy maintsy alehan'ny distros Linux ... ary samsung nanolotra ny kinova, windows with contniums ubuntu nahatratra ubuntu ratsy ho an'ny andorid
saingy mieritreritra aho fa izany no tena ho avy
Androany izay finday avo lenta rehetra dia manana fahefana hamindra distros 100% toy ny hoe solosaina mahazatra .. mampiasa dock hametrahana peripheraly ary hahafahana mampiasa azy ireo ho toy ny solosaina BASE, monitor, hd, keyboard na printer ethent mouse
Ny lsaudo dia maniry ny hahita ny kinova farany ary azo apetraka amin'ny telefaona be indrindra raha azo atao amin'ny rehetra ... manao compilation
Mamaly an'i nolgan